प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खर गरे एस्तो घोषणा, हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह !! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खर गरे एस्तो घोषणा, हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह !!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाचारमा आएजस्तो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । उनले यस्ता हल्लाको पछि नलागेर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रवार भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा नभएको बताएका छन् । उनले आफुले कहिँ कतै यसवारेमा कुरा नगरेको भन्दै समाचारमा आएको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आदेश दिएका छन् ।उनले ढुक्क भएर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सुझाव दिएपछि त्यसवारे समाचार सार्वजनिक भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफुले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनका बारेमा कसैसंग सल्लाह समेत नगरेका कारण त्यसको सम्भावना नभएको बताएका छन् । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
‘मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको हल्ला कसरी आयो । यस्ता हल्लाको पछि नलाग्नुस्, ढुक्कसँग काम गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्र्धत गर्दै एक मन्त्रीले बताए । समाचारमा यो मन्त्री जान्छ अब यो आउँछ भन्दै लेखिएका छन् त्यस्ता विषयमा विश्वास नगर्नु यस विषयमा मैले कहिँ पनि छलफल गरेको छैन । तपाईंहरू मन्त्रालयको कमान्ड लिएर मन्त्रालयका काम गर्नुस् प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने ।
बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत आजको मन्त्रीपरियषद बैठकमा भएको छैन । विहिवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले त्यसवारे निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर शुक्रवारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा त्यसवारे निर्णय नभएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
६ महिनादेखि खाली छ अझ केही दिन ढिला हुँदैमा केही फरक पर्दैन प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका छन् । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने तीनजना सांसदमध्ये एक पद युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएसँगै खाली छ । फेरि सांसद हुन नसकेकाले उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताएका छन् । संसद सदस्य नभइ ६ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री हुन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ । उनको दुई वर्षको पदावधि सकिएर ६ महिनादेखि खाली रहेको सिटमा नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय बिहीबार गरेको छ । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कालापानीका लागि खै बजेट प्याकेज ? एमसीसी तुरुन्त फिर्ता गर